Ilay mpilalao sarimihetsika Derek Luke momba ny toetra amam-panahy sy mazava ao amin'ilay fizarana faharoa 'The Purge'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ilay mpilalao sarimihetsika Derek Luke momba ny toetra amam-panahy sy mazava ao amin'ilay fizarana faharoa 'The Purge'
by Waylon Jordan Desambra 18, 2019
nosoratan'i Waylon Jordan Desambra 18, 2019
Ilay mpilalao sarimihetsika Derek Luke dia nanana asa be hatramin'ny nanombohany ny laharam-pahamehany tamin'ny anjara andraikiny amin'ny sitcom toy ny Ilay Mpanjakan'ny mpanjakavavy ary Moesha mialoha ny fizotran'ny anjara asany tamin'ny Antwone Fisher mifanohitra amin'i Denzel Washington tamin'ny 2002.
Hatramin'io fotoana io dia niseho tamin'ny lahasa maromaro niampita karazana andalana izy Nandeha tany am-ponja i Madea ny Kapiteny America: The First mpamaly ary ny an'i Netflix 13 Antony Nahoana. Na eo aza izany rehetra izany, tsy mbola niditra an-tsehatra tamin'ny toerana mampihoron-koditra mihitsy izy. Hatramin'ity taona ity, rehefa nitana ny toeran'i Marcus Moore izy tamin'ny fizaran-taona faharoa an'ny USA The Purge.
Miorina amin'ny franchise film malaza, The Purge tantara mitohy amin'ny tele nanitatra izao rehetra izao, ary indrindra tamin'ny vanim-potoana faharoa satria mifantoka amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny Purge isan-taona aorian'ny nifaranan'ny "fialantsasatra" mahery setra.
Ho an'ny toetran'i Luke, dokotera ER izay nandany ny fiainany nanandrana nanatsara ny tenany sy nanampy ireo manodidina azy, midika izany fa manandrana mamantatra ny antony nanandraman'ny olona iray hanadio azy izay mitarika azy amin'ny dia tsy mampino mandritra ny taona iray vaovao. Manakaiky ny fomba fanadiovana.
Nandany minitra vitsivitsy ilay mpilalao mba hiresaka amin'i iHorror momba ny zavatra nitaona azy ho any amin'ny sehatry ny karazan-dahatsoratra sy ny dikan'ny toetrany toa an'i Marcus. Dia lavitra mahaliana ho azy na ho mpilalao sarimihetsika na olona izany.
** Ity resadresaka ity dia misy mpanimba ho an'ny vanim-potoana faharoa amin'ny The Purge**
"Nihalehibe tao amin'ny tokantrano Kristiana tena ara-panahy sy ara-Baiboly aho," hoy ny fanazavany rehefa nanontaniana momba ny antony nanintona azy ilay karazana horohoro. “Nahafinaritra an'ireo nihalehibe tsy nanan-dray ny arabe. Ny valintenin'i Neny dia hoe: 'Hataoko ao anaty tontolo iray ianao hamahanana ny fanahinao fa tsy homena hadalana ny lohanao.' Mahita zavatra mitombo be ianao any am-piangonana toa izany. Olona sitrana; ny olona mamoaka demonia. Nanaiky ianao fa tena misy io. Ka rehefa mijery fahitalavitra sy horonan-tsary mampihoron-koditra aho dia tsy nifanaraka tamin'ny zavatra niainako tamin'ny fahazazako izany. ”
Na izany aza, dia nisoroka karazan-tahotra izy tamin'ny fiandohan'ny asany. Tsy dia nahaliana azy loatra izany tamin'ny andro voalohan'ny naha mpilalao sarimihetsika azy. Na izany aza, tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nanomboka nanontany tena izy hoe hanao ahoana ny endriny sy ny feony ao amin'io habakabaka io.
Inona no nananany tao amin'ny trano familiana misy kodiarana azony nivelatra tamin'ny fidirana amin'ilay karazana?
“Ny olona mijery horohoro dia toy ny kintana rock, ralehilahy. Mahatoky izy ireo, ”hoy izy. “Nanomboka nieritreritra aho fa tsy tokony hisalasala hiditra amin'io toerana io. Rahoviana The Purge Tonga aho fa tsy dia nanaitra ahy toy ny olona nanaraka ny asako izany. ”
Ny andraikitr'i Marcus dia niantso an'i Luke noho ny antony maro ary tsy ny kely indrindra amin'izany dia ny antony manosika ilay olona.
Na dia voahodidin'ny herisetra aza izy ary atahoran'ny herisetra, dia nanao izay azony natao i Marcus tsy raha manome an'io raha tsy hoe tena voatosika hanao izany izy, ary na dia izany aza dia manandrana miresaka amin'ny lalan-kivoahana izy raha afaka.
"Ny zavatra nianarako momba an'i Marcus dia ny fahatezerana afaka mandringa anao sy manajamba anao ary mieritreritra aho fa niady i Marcus mba hijanona mazava," hoy i Luke. “Fantany fa raha te-ho ray dia manambady, manasitrana, ny fahadiovana no lakileny. Izy koa, izay tiako momba azy, dia ny nanesorany ny tenany tsy ho avy ary nieritreritra izy fa raha mahavita azy dia afaka manao izany koa ny hafa ary te hanampy azy ireo hanao izany izy. ”
Io karazana mazava io koa dia nanova ny fivoaran'ny toetra amam-panahy tao amin'ny efitrano fanoratana.
Mipetraka ao amin'ny faritra mahafinaritra be i Marcus ary voahodidin'ny mpifanila vodirindrina fotsy be, araka ny hita, fa izy no namely azy. Mety ho mora be ny nitantara tantara momba ny hazakazaka ary nifantoka tanteraka tamin'ny zava-misy fa i Marcus dia lehilahy mainty nankahala ny mpifanila vodirindrina aminy satria mainty izy.
Fa kosa, nitantara tantara hafa ny mpanoratra, nanome antony hafa hanentanana azy ireo, ary namorona fitantarana hafa tanteraka ho an'i Marcus tamin'ny farany rehefa nifanehitra tamin'izy ireo momba ny zavatra nataon'izy ireo izy.
"Hafa noho ny tamin'ny fotoana niarahako voalohany tamin'ny mpanoratra," hoy i Luke nanazava. “Tany amin'ny tanànan'i Marcus dia mora ny nijery ny zava-misy, saingy nieritreritra aho fa safidy matanjaka kokoa ny miaraka amin'ilay fanamby ao anatiny. Tsy feno fankahalana. Tsy tezitra. Tsy tonga amin'ny tian'ny hafa hahatongavanao. Izany no nahatonga ahy hieritreritra fa mahaliana izany. ”
Ny fizarana farany an'ny The Purge nalefa omaly alina tany Etazonia ary niaraka tamin'ny vanim-potoana tao aoriantsika, nanontany tena izahay raha te-hidina lavitra kokoa amin'ilay karazana i Luke.
"Ie heveriko fa ny tena mahavariana dia [ilay hevitra hoe] ny tsy hita dia misy fiatraikany amin'ny hita," hoy izy. “Ny tiako amin'ny horohoro sy sci-fi ary ireo manampahaizana manokana dia tsy misy tahotra izany amin'ny fikarohana ireo tsy hita.”
Tsy afaka nifanaraka bebe kokoa izahay ary manantena ny hahita an'i Derek Luke manao horonantsary sy andian-tantara marobe amin'ny sehatry ny karazana.
Derek LukeInterviewsThe PurgeEtazonia NetworkWaylon Jordan
'Toerana mangina fizarana II' no nahazo ny tranofiara voalohany
'Inona no hitan'i Josia' horonantsary momba ny horohoro ara-psikolojika mamehy ny famokarana